GAROOWE(P-TIMES) – Maxkamadda Darajada koowaad ee gobalka Nugaal ayaa maanta la horkeenay 7 eedaysane oo loo haysto in ay ka dambeeyeen Dil iyo Kufsi loogu geystay magaalada Garoowe Hodan Axmed Shanlayste oo ahayd Hooyo lagu dilay Xaafaddaha Garoowe mid kamid ah, waxaana dilkeedu uu dhacay sannadkii lasoo dhaafay bilowgiisii ilaa haddana aan waxba laga qaban.
Maxkamadda ayaa la horkeenay eedaysanayaal, waxaana buuq iyo sawaxan uu hareeyey markii la bilaabay dhageysiga dacwada, iyadoo dadka la eedeynayo aysan haysan wax difaacaya, ka dib markii Qareenadii ay diideen inay shaqo galaan, sababo la xariira Canshuur ay ku soo rogtay wasaaradda Maaliyada iyo cabasho ay ka gudbiyeen Kusimaha Gudoomiyaha maxkamadda Sare.
Maxkamadda ayaa xakameyn weyday dhaqdhaqaaqa goobta iyo sidaas oo kale in si hufan loo dhageysto eedaha kala duwan ee lajeedinayo, waxaana Xeer Ilaalinta Puntland ay shaaciyeen xog baaris kala duwan oo ay sameeyeen, waxayna sheegeen in aysan wali heynin cadeymo buuxa oo ku cad 6 eedaysane oo maxkamadda la horkeenay.
Mid kamid ah eedeysanayaasha oo la sheegay in uusan caafimaad-qabin ayaa madasha ka qirtay in uu ka dambeeyey kiiska kufsiga iyo dilka ee Hodan Axmed Shanlayste, taas oo kaliftay in ay buuq sameeyaan qaar kamid ah dadkii ka qeybgalay dhageysiga oo u arkayay in ay tahay mid aan cadaalad aheyn.
Daahfurnaanta tooska ah ayaa la joojiyey ee Maxkamadda, taas oo shaki badan laga muujiyey, waxaana qaar kamid ah Ehelada oo madasha ka hadlay ay sheegeen in aysan si wanaagsan waxba u socon aysan raali ka aheyn hab dhaqanka loo maray kiiskan.
Wararka dheeraad ah ee aan ka helnay gudaha maxkamda ayaa sheegay in kiiska uu ku soo dhamaaday natiijo la,aan sabab la xiriirta Masuuliyiinta maxkamada iyo DNA oo sheegay in aan wax Cadayn ah oo sheegaya in ay danbiga gaysteen eedaysanayaashan aan lahayn,